नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : अमेरिकाका लागि नेपाली राजदुत डा. अर्जुन कार्कीको कार्यकालको सफलताका लागि हाम्रो हार्दिक शुभकामना र बधाई ।
अमेरिकाका लागि नेपाली राजदुत डा. अर्जुन कार्की आफ्नो कार्यभार सम्हाल्न हिँजो अमेरिकाको राजधानी वाशिङटन डिसी अाइपुग्नुभएको छ । वहाँ लाई अमेरिकामा हार्दिक स्वागत छ । वहाँको कार्यकालमा नेपाल र अमेरिका बिचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ बन्न सकोस । अमेरिकामा बस्ने हरेक नेपालीले पनि नेपाली राजदुताबासलाई आफ्नो अभिभाबक ठान्न, अन्तरमन देखी महशुस गर्न पाउन । वहाँको कार्यकालको सफलताका लागि हाम्रो हार्दिक शुभकामना र बधाई ।